Photo Credit - www.specialenglishcentre.com
People often refer to old saying, often called proverbs. These quotations are repetition of someone else's statement or thoughts. There are numerous Myanmar quotes throughout 1200 years of Myanmar language history.
တန်နှင့်အားကို လေးနှင့်မြှားကဲ့သို့ ညီအောင်လုပ်ပါ။
စားရမှာလည်း သဲတရှပ်ရှပ်၊ လွှင့်ပစ်ရမှာကလည်း အဆီနဲ့ တဝင်းဝင်း။
ဆင်ဖြူမျက်နှာ ဆင်မည်း မကြည့်ဝံ့။
ကျားကြောက်လို့ ရုှင်ကြီးကိုး၊ ရှင်ကြီး ကျားထက်ဆိုး။
တောမီးလောင် တောကြောင် လက်ခမောင်းခတ်။
ခု ရေတွင်းတူး၊ ခု ရေကြည်သောက်၍ မရ။
ကြက်မတွန်၍ မိုးမလင်း၊ ကြက်ဖတွန်မှ မိုးလင်းသည်။
တောင်းစုတ် ပလုံးစုတ်သာ ပစ်ရိုးထုံးစံ ရှိသည်။ သားဆိုးသမီးဆိုးကို ပစ်ရိုးထုံးစံမရှိ။
တစ်တက်စားလည်း ကြက်သွန်၊ နှစ်တက်စားလည်းကြက်သွန်။
မချစ်သော်လည်း အောင့်ကာနမ်း၊ နမ်းသော်လည်း ပင့်သက်ရှူ။
ခွေးကလေး အရောဝင်တော့ ပါးလျက် နားလျက်။
ကိုယ်စီးတဲ့မြင်း အထီးမှန်းအမမှန်း မသိ။
ထိုင်နေတော့ အကောင်းသား၊ ထသွားမှ အကျိုးမှန်းသိ။
ပါးစပ်က ဘုရား ဘုရား၊ လက်က ကားယား ကားယား။
ပေးစရာ ငွေမရှိ၊ ပြေးစရာ မြေမရှိ။
အပ်ဖြင့် ထွင်း၍ရလျှင်၊ ပုဆိန်ဖြင့် မခုတ်ရ။
မီးများ မီးနိုင်၊ ရေများ ရေနိုင်။
ဆူးပေါ်ဖက်ကျလျှင် ဖက်ပေါက်သည်။ ဖက်ပေါ်ဆူးကျလျှင် ဖက်ပေါက်သည်။
အနှစ်မရှိတဲ့တော ကြက်ဆူပင် မင်းမူ။
အခြားလူများ၏ မျက်ချေးကိုမြင်၍ ကိုယ့်မျက်ချေးကိုယ်မမြင်။
အစားမတော် တစ်လုပ်၊အသွားမတော် တစ်လှမ်း။
ငှက်သည် ပျံရင်းသေသည်။ လူသည် ကြံရင်းသေသည်။
ပန်းသတင်း လေညှင်းဆောင် လူသတင်း လူချင်းဆောင်။
ကံသာလျှင် အမိ၊ ကံသာလျှင် အဖ။
ယောက်ျားပျင်းတော့ ကျောခင်း၊ မိန်းမပျင်းတော့ ခြေဆင်း။
ချစ်စကို ရှည်စေ၊ မုန်းစကို တိုစေ။
ကုန်ရှုံးတော့ တစ်ရက်၊ လင်ရှုံးတော့ တစ်သက်။
မမှားသော ရှေ့နေ၊ မသေသော ဆေးသမား။
တစ်ယောက်ကောင်းက တစ်သောင်းဗိုလ်ခြေ ညက်ညက်ကြေ။
အစားမတော်တစ်လုပ်၊ အသွားမတော် တစ်လှမ်း။
ကြိုးချင်းထား ကြိုးချင်းထိ၊ အိုးချင်းထား အိုးချင်းထိ။
ကျော်တော့လှေသူကြီး ညားတော့ လှေထိုးသား။
အပွေးမြင် အပင်သိ၊ အသွေးမြင် အသွင်သိ။
နွားပျိုသန်လှ နွားအိုပေါင်ကျိုးသလောက်ပဲ ဖြစ်သည်။
ကြံသည် အစဉ်ချိုသော်လည်း လူသည် အစဉ် မချို။
ဘုန်းကြီးစာချ၊ မိကျောင်းမင်း ရေခင်းပြ။
ကျွန်ယုံတော့ တစ်လုံးကန်း၊ သားသမီးယုံတော့ စုံလုံးကန်း။
စိန်ကောင်းကျောက်ကောင်း ရောင်းနေသည့် အခါ၌ ဆေးရိုးသည်က ကန့်လန့်ကန့်လန့်။
လုပ်စားတော့ မိုးခေါင်၊ ခိုးစားတော့ ခွေးဟောင်။
ကိုယ်မချိ အမိသော်လည်း သားတော်ခဲ။
Desire for haste is delay.
He asked for bones because he wants flesh.
He lives in the bushes but his spirits is in the heavens.
He who talks isn't strong; he who's strong doesn't talk.
အစားမတော် တစ်လုပ်၊ အသွားမတော် တစ်လှမ်း။
Property is guarded by luck. ဥစ္စာကံစောင့်။
REFERENCE & CREDIT TO:
- မြန်မာ-အင်္ဂလိပ်(စကားပုံများ) ဧဒင်ဘာသာပြန်အဖွဲ ့
- Lu Zoe (San Lwin)
You are here: Myanmar Guide & Reviews 🏠 / Languages / Famous Myanmar Quotes (Proverbs)
This isagreat pleasurefor that executive committeeto dedicate yourself the members andhavingthe opportunity to organize the existence of
Myanmar of some major international trade fairs , for example International Tourism Boerse Asia 2014, World Travel Market 2013 and International Tourism Boerse 2014 and Thailand Travel Mart Plus 2014 for example.
Address: Nilar Condo, No.204 , Room #04-B ,4th Floor, Bo Myat Htun Street (Middle Block), Pazundaung Township.
Tel: 951- 523473
Web: www.myanmar-tourism.com , www.tourismmyanmar.org